Madaxtooyada Somaliland Oo Beenisay in la lunsaday raashin deeq ah oo dalka la keenay | Somaliland.Org
Madaxtooyada Somaliland Oo Beenisay in la lunsaday raashin deeq ah oo dalka la keenay
September 25, 2011	“Warkaasi waxba kama jiraan, Gudida abaaruhuna waxay asteeyeen uun goobaha ee waxa deeqda gacantooda ku bixinaysay Ha’yada”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxtooyada Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay war sheegayay in la lunsaday deeq ay dalka keentay Ha’yada khayriga ah ee Imaaraadka carabta.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa gaashaanka ku dhuftay jiritaanka warkaasi oo uu maanta qoray wargeyska Jamhuuriya.
“Warka wargeyska Jamhuuriya qoray cadadkiisii maanta oo ka hadlayay deeq loo qeybinayay dad tabaalaysan oo la lunsaday ama suuqyo lagu iibinayay, warkaasi wax aynu ognahay ma aha waana wax aanay waxba ka jirin,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Afhayeenku waxa uu ka hadlay deeqdani sidii ay ku timid waxaanu yidhi “Markaan ka waramo deeqdani waxay ahaydba iyo sidii ay ku timidba waxay ahayd Ha’yada khayriga ah ee imaaraadka carabta waxa dalka keenay nin Somalilander ah oo la yidhaahdo Maxamed Sheekh Cumar C/Raxmaan (Baraawe), Ha’yadu go’aankooda ayay ku yimaadeen laakiin ninkaasi muwaadinka ah ayaa gadh wadeen u ahaa. Markaa C/Raxmaan waxa uu Ha’yadan ku soo xidhiidhiyay Gudida gurmadka abaaraha u qaabilsan qaranka, Guddidaasna waxa guddoomiye u ah Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland.”
Cabdilaahi Cukuse waxa uu ka hadlay qaabkii loo maamulay deeqdan waxaanu yidhi “Ha’yadu markii ay Guddida u yimaadeen waxay u sheegeen inay doonayaan inay dhakhso u noqdaan, deeqda ay sidaan oo ay ugu tallo galeen 2 kun iyo Boqol qoys-na meelo dhow dhow loo qaybiyo, markaa Guddida abaaruhu way fadhiisteen waxaanay u qorsheeyeen goboladan dhow dhow ee ay ka mid yihiin Saaxil, Maroodi jeex, Awdal iyo Gabilay waxaanay goboladaasi uga asteeyeen gobol walba laba meelood. Guddida abaaruhu waxay Ha’yadan fududaysay uun inay goobahana u asteeyaan isla markaana ay kaxeeyaan, laakiin cida deeqda dadka gaadhsiinaysay ee gacantooda ku qaybinaysay waxay ahaayeen Ha’yada khayriga ah ee imaaraadka lafteeda.”
Markaa Ha’yadaasi khayriga ah ee raashinka dadkeena ugu deeqday ee gacantooda ku qeybinayay uguma abaal gudi karno inaynu nidhaahdo raashinkii ay keeneen waxay ka baxeen gacmo dhexdood oo waa la lunsaday. Haddii cid dhexeba loo dhiibay oo ay deeqdan qeybinaysay wuu iman lahaa shakigani laakiin iyaga ayaaba gacantooda ku qeybinayay,”Ayuu yidhi Afhayeenka Madaxtooyada oo caawa u waramayay shabakada wararka ee Somaliland.Org.
Afhayeenku waxa uu amaanay waxqabadka Gudida abaaraha waxaanu yidhi “Guddida abaaruhuna waxay leeyihiin karaamo, waxay ku soo guulaysatay inay dalka ka samato bixiso ururinta deeqdii loo ururinayay dadkii abaaruhu saameeyeen ee dalka iyo qeybintoodiiba sanadkii hore. Waxa kale oo ay ku guulaysatay waxyaabo badan oo kale oo ka dambeeyay.”
“Ha’yadaha kale ee Madaxtooyaduna waa sidaasi si lee goo waxay mudada ay xukuumaddu jirtay ay kaalmo gaadhsiiyeen kumanaan iyo kumanaan qoys, marna xanta noocan oo kale ahi may dhicin manay iman. Waan ka xumahay waxaanan Saxaafada ugu yeedhi lahaa dadkeena abaaruhu waxyeeleeyeen wixii aynu u qaban karaynay way u qabanay ee caalamka cidii wax taraysa ha laga daayo in wax been ah laga sheego,”ayuu yidhi Cabdilaahi Cukuse.
Previous Post“Siciid Sulub waa ninkii hashiisii gawracay ee la yidhi, waar hashii gawracna ma hadlayaa”Next PostGuddida Joogtada ee Wakiilada Oo Golaha horgeeyay warbixin ay ka diyaariyeen Ha’yado “	Blog